Taxanaha Gargaarka: Sida ay hay'adaha gargaarka u qiimeeyaan baahiyaha ay qeyladhaanta ka soo saaraan - Radio Ergo
Taxanaha Gargaarka: Sida ay hay’adaha gargaarka u qiimeeyaan baahiyaha ay qeyladhaanta ka soo saaraan
in Taxanaha gargaarka, Wararkii u Danbeeyay
(ERGO) – Taxanaha gargaarka waa xubno koob-kooban oo aan ku eegi doonno xaaladda bani’aadannimo ee dalka iyo howlaha gargaarka ee socda. Waxaan ku casuumi doonnaa mas’uuliyiin ka socda dowladda iyo hay’adaha gargaarka, annaga oo hadba ku soo qaadan doonna mowduucyo cusub oo xaaladaha markaas taagan la xiriira.
Waxaan ugu talagalnay in aan dhegeysteyaasheenna uga haqab-tirno xogta ay u baahan yihiin ee u sahli karta in ay qaataan go’aamo xog-ogaalnimo leh. Su’aalaha ay dadka noogu soo duubaan lambarka gaaban ee 2012 ayaan sidoo kale jawaabo ugu raadin doonnaa taxanahan.
Qeybtan oo aan ku falanqeyneyno sida ay hay’adaha gargaarka u qiimeeyaan baahiyaha ay qeyladhaanta ka soo saaraan waxaan ku wareysanaynaa Yaxye Maxamuud Axmed oo ah isu-duwaha mashaariicda ee hay’adda Asal ee ka shaqeysa horumarinta dhallinyarda.
Yaxye oo Hargeysa jooga wuxuu online-ka ugu warramay Cabdiraxmaan Taysiir.
Halkan ka dhegeyso xubinta oo dhameystiran.
Daymaha ay qaataan xoolo-dhaqatada ay abaartu saameysay oo culeys ku haya ganacsatada Ceelhuur